Zvishongedzo | Yakakwana Yekukwira Kukwira Masystem
Yakakwana Yekuburuka Lanyard Guard
Iyi yakapfava, yakajeka tubhi inokwana zvakachengeteka pamusoro pechero modhi 220/230 Yakakwana Yekudzika lanyard, ichiita kuti ikurumidze uye nyore kuchenesa uye kuisa utachiona hwepamusoro-pekubata mapoinzi uchidzikisa kudzokororwa kwemakemikari. Iyo Lanyard Guard inopawo kuramba kweabrasion uye inobvumira kuongororwa kunoonekwa kweye lanyard pasina kudikanwa kwekubviswa. Zvakareruka kuisa pane nyowani uye zviripo lanyard zvakafanana.
INOKOSHA: Kuti utarise Kuisa Vhidhiyo tinya pano. Kuti utenge kubva kuAerial Adventure Technologies tinya pano.
Kurema: 5.6 oz (158 g)
Kureba: 18 inches (45 cm)
Chinyorwa: Bvisa Vinyl (inogadziriswazve)
Lifespan: 2-gore rakakura (rakafanana nekutsiva lanyard)
Tsvaga Reseller Pedyo Newe
Yakakwana Yekuburuka Auto Belay Gate
Iyo Yakakwana Yekudzika Auto Belay Gate ndiyo inofanirwa-kuve neako kune yako auto belay. Gadzira iri nyore clip-in poindi ye auto belay kana isiri kushandiswa panguva yekushanda maawa. Masuwo edu eBayay anonyatso kuratidza iwo auto belay nzira munzira yako yekurovedza muviri uye nekuyeuchidza vanokwira kuti vatore mukati vasati vakwira.
Iine auto belay lanyard yakachengetedzwa kumusoro kumusoro, iyo Auto Belay Gate inova chipingamupinyi chemuviri chinofukidza makumbo ekutanga munzira uye chinoderedza mukana wekukwira usati watanga kupinda mukati. Yakagadzirwa nemirairidzo yakajeka inoita kuti zvive nyore kunzwisisa mune chero mutauro, iwo akakosha manejimendi manejimendi manejimendi chishandiso chero auto auto mabel anoshandiswa. Kuonekwa kwepamusoro kweruvara rweyero uye yakajeka mirayiridzo inoyeuchidza vanokwira kuti vatorere mukati vasati vakwira. Kana gedhi raradzikwa pasi, iro rekumashure rinoratidza nzvimbo yekumhara kune anokwira kumusoro.
Yakasimba 18 oz yakavharwa vinyl
Yasimbiswa yepamusoro clip-mune chiuno
Anogadziridzwa ezasi ekumisikidza tabo eanosiyana anchor mapoinzi
Tambo dzepazasi dzinogona kusungirirwa kuburikidza nekabhaudhi inobata, sikuruu mukubata, kana bolt hanger
Kuonekwa kwepamusoro yero uye nhema dhizaini
Mifananidzo nemutauro zvakagadzirwa zvinoenderana neIO uye ANSI chengetedzo yemasaini
INOKOSHA: Kana isiri kushandiswa, iyo lanyard yeAkakwana Descent Auto Belay inofanirwa kudzoserwa zvachose mudzimba. Izvi zvichawedzera hupenyu hweiyo yekudzosa chitubu. Teki tambo inogona kusunganidzwa kune iyo carabiner yekutora uye kudzosera iyo lanyard painenge isiri kushandiswa.
Kurema: 1 lb (0.45 kg)
Masuwo Ekuyera: 36 mu (91.4 cm) Wide x 39 mu (99 cm) Yakareba [Pasina Top Top Loop & Adjustment Straps]
Gedhi Material: 18 oz Yakavharwa Vinyl
Wepamusoro Wechirukwa Chiraira Zvekushandisa: 1 mu (2.5 cm) Heavy Duty Tubular Nylon Webbing
Pazasi Tambo Yekubatisisa Zvinhu: 1 mu (2.5 cm) Polypropylene Webbing
Kugadziridza Buckle Material :: 1 mu (2.5 cm) Plastiki
Yakakwana Descent Auto Belay Inotsiva Lanyard
Yakakwana Descent Auto Belay Replacement Lanyards inogara yakasimba, inogona kutsiviwa zviri nyore pasina kudzoka sevhisi, uye inopihwa mune akawanda carabiner uye kureba kusanganisa. Kutsiva ndeye snap uye inogona kupedzwa mumaminetsi mashoma. Iva neyakagadzika lanyard mune inochengeterwa mayuniti ari kushanda aine mashoma nguva yekuzorora.
Kurema: 1 - 2 lbs (0.45 - 1 kg)
Yakakwana Yekuburuka Belay Bar Kuisa Kit
Iyo Belay Bar Kubhururuka Kit inogona kukurumidza uye nyore nyore kuiswa pane aripo mabara mabara kuti igadzire yakakodzera clip-mune poindi yePerfect Descent Auto Belays. Iyo yakasungwa nylon tambo inoona kuti anchor inogara munzvimbo uye inodzivirira kukuvara pamusoro pebhawa. Chigadziro chekuchengetedza chinosanganisirwa uye chinofanira kusungirirwa kune anokora yechipiri yakakodzera inosvika. Iyo Belay Bar Kubhururuka Kit iri nyore kubvisa sezvazviri kuisa, ichikubvumidza iwe kutamisazve yako Yakakwana Descent Auto Belays sezviri kudikanwa.
Iyo Belay Bar Kubhururuka Kit inopfuura nepakati, choker maitiro anchorage connector. Yakagadzirwa kubva pa5 inch polyester webbing, iyo yekumisikidza kit inoratidzira yakagadzira simbi uye zinc yakavezwa D-mhete uye yekuchengetedza chipfuramabwe pamwe neakaviri akagadzira simbi uye zinc yakafukidzwa carabiners. Iyo Belay Bar Kubhururuka Kit inofanirwa kushandiswa neyechipiri backup chipfuramabwe uye bhaa rebha rinofanira kuvharwa kumicheto miviri kudzivirira tambo kubva mukutsvedza. Tarisa nemugadziri webara rako rebhaira uye kukwira madziro, kana neinjiniya anokwanisa kuratidza yako system inokwanisa kutsigira inotarisirwa mitoro.
Kurema: 3 lb (1.4 kg)
Minimum Kuputsa Simba: 5,000 lbs (22.2 kN)
Minimum Belay Bar Dhayamita: 2.5 mu (63 mm)
Kunonyanyisa Belay Bar Dhayameter: 4 mu (102 mm)
Kurema Unyanzvi: 350 lbs (159 kg) Yakasanganiswa Kurema kweAuto Belay uye Climber
Anchor Sungira Chinyorwa: Polyester Webbing
Anchor Strap Kupwanya Simba: 6,000 lbs (26.5 kN)
D-Ring Hardware Chinyorwa: Yakagadzirwa simbi, Zinc Yakaiswa
D-Mhete Kupwanya Simba: 5,000 lbs (22.2 kN)
Backup Chigadziro Chinyorwa: Nylon Webbing
Kuchengeta Sling Kuputsa Simba: 5000 lbs (22 kN)
Carabiner Chinyorwa: Yakagadzirwa simbi, Zinc Yakaiswa
Carabiner Kupwanya Simba: 9,200 lbs (41 kN)
Yakakwana Yekubuda Yevarindi
Iyo Bodyguard yakagadzirirwa kuchengetedza kwakakwana kwePerfect Descent 220/230 dzakateedzana Auto Belays, kusanganisira iyo Speed ​​Drive uye Direct Drive mamodheru. Iyo Bodyguard inoratidzira nhete yepadding iyo inonamatira zvakachengeteka kune iyo auto belay, inoderedza ruzha uye kudzivirira iyo kesi uye yako yekukwira madziro kubva kukuvara. Ngazi-yekukiya bharanzi patambo yepamusoro inobvumira iyo Yekuchengetedza kuti igadzikiswe uye ibviswe apo auto belay yakaiswa, ichiita kumisikidza uye kubvisa zviri nyore uye nekukurumidza. Iyo Bodyguard ndiyo inofanirwa kunge iine chinowanikwa kune yako auto belay kudyara.
Kurema: 0.2 lbs (0.09 kg)
Padding Chinyorwa: Vhura Cell Furo
Kumusoro Tambo Yesimbi: 3/4 mune Heavy Duty Elastic
Mhemberero dzeChikwama: 1000D Yakagadzirwa Cordura Nylon
Manera-Kukiya Bharuki Chinyorwa: Injiniya Thermoplastic